सामाजिक Archives - Page 19 of 38 - khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
ललितपुर स्थित चापागाउँको प्याङगाउँमा बम विष्फोट
Posted On December 2, 2017 Author siteadmin Category राजनीति, सामाजिक.
ललितपुर, मङ्सिर १६ । ललितपुर स्थित चापागाउँको प्याङगाउँमा बम विष्फोट भएको छ । नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको चुनावीसभालाई लक्षित गरेर प्रेसर कुकर बम विष्फोट भएको हो । विष्फोटबाट कुनै क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ । ललितपुरमा पछिल्लो २४ घन्टामा बम विस्फोट भएको यो दोश्रो पल्ट हो । शुक्रबार बेलुकी पनि ललितपुरको कुपण्डोलस्थित युएन पार्कमा बम विस्फोट भएको… Read more »
अस्तव्यस्त रत्नपार्कमा माइक्रो चढ्न सभ्य लाम
सिधा पाइला चाल्न हम्मे छ। मान्छे गाडी चढ्न ठेलमठेल गर्दै छन्। घम्साघम्सीमा कसैका झोला खस्छन्, कसैका खुट्टा किचिन्छन् त कसैका टाउका ठोक्किन्छन्। यस्तो लाग्छ, मानौं त्यहाँ होडबाजी छ, गाडी चढ्नेको। यो होडमा सफल हुनेहरू सिटमा बसेर जितको खुइय मार्छन्, नसकेकाहरू सडकमै निरीह उभिन्छन्। कोही आधा जीउ कुप्य्राएर यी दुवै भावना छल्न खोज्छन्। बिहीबार साँझ साढे… Read more »
Posted On November 21, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
ललितपुरको पुल्चोकमा विभिन्न कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले बालअधिकारबारे सार्वजनिक सवारीसाधनमा काम गर्ने नाबालक सहचालकहरुलाई पनि जानकारी गराए। तर ललितपुरको लगनखेलबाट उपत्यकाका विभिन्न रुटमा चल्ने सवारीसाधनका सहचालकले भने आफूहरुले काम गर्दा खुशी भएको बताए । उनीहरुले सहचालकलाई भन्दा पनि एनजिओ/आइएनजिओले सडकबालबालिकालाई उद्दार गर्न आग्रह गरे । उनीहरुले भने, ‘हामी यसैमा खुशी छौं । पढ्न मन छैन… Read more »
सर्वाेच्च अदालको ग्राउन्डमा बम भएको आशंका, स्थिति तनावग्रस्त
अर्थ संसार, काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतको ग्राण्डमा वम भएको आशंका गरिएको छ । अदालत परिसर वरिपर कर्मचारी र पत्रकारको भिड लागेको छ । अदातलको सवै कामकाज ठप्प भएको छ । कसैलाई पनि भित्र झिर्न दिइएको छैन ।
एक कार्यक्रममा दलाई लामा भन्छ बुद्ध नेपाल बाट होइन
दलाई लामा, बौद्ध धर्मको संसारमा एउटा चित्र, संसारको बौद्ध भिक्षुहरूमध्ये एक छ। आध्यात्मिक नेता र तिब्बतको राजनीतिक नेता पनि हुन सक्दछ, दलित लामा तिब्बत बौद्ध धर्मलाई नयाँ उँचाइमा ल्याउछ कि तिब्बत बौद्ध धर्मले आफ्नो सम्पूर्ण इतिहास कहिल्यै देखेको छैन। तिब्बतको राजनीतिक नेताको रूपमा, दलित लामा तिब्बतीले चीनबाट एक स्वतन्त्र राज्य बनाउन प्रयास गर्छन्। यसबाहेक, भर्खरै… Read more »
Posted On November 19, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
काठमाडौं- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। काठमाडौंस्थित लाजिम्पाट निवासमा उनलाई अबेर राति हृदयघात भएपछि नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। बिहान साढे ५ बजे अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको मुटु बन्द भइसकेको नर्भिक स्रोतले जानकारी दियो।
देशार समज को पचौ बर्शिक साधारन सभा
Posted On September 22, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
देशार समज को पचौ बर्शिक साधारन सभा हिजो चापागाउँ फुल्बारी हल मा सम्पन भएर्को छ
गरे नहुने के छ?
Posted On September 20, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
चापागाउँ ललितपुर – गरे नहुने के छ ? हिजो फोहरको थुप्रो आज सललल पानी बगेको धारमा परिणत भयो न पत्याए आउनुस हेर्नुहोस न्हू:ज महिला मण्डली Click to see video